Igbo - 01. Conversation - Booklet 1: Nnukwu ọrụ nke Jizọs Onyenwe anyị | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 1 Great Commission
1 - NNUKWU ỌRỤ NKE JIZỌS ONYENWE ANYỊ
Gini mere ndi kristot jiri kerita ndi Alakụba? Ileba anya na nnukwu ọrụ Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya na Matiu 28:19-20 na-eme ka ị ghọta ihe kpatara na etu ekwesịrị isi rụọ ọrụ a. N'ebe a nnukwu ọrụ dị iche na nke Kraịst ka ndị ozi na - eso ụzọ Muhammad nyere ndị na - eso ụzọ ya ịgbasa Islam.
1.02 -- Oku
1.03 -- Ike niile dị n’eluigwe na n’ụwa
1.04 -- Ya mere, gaa!
1.05 -- Nduzi nke mmụọ nsọ
1.06 -- Kedu ihe anyị ga-enye?
1.07 -- Mmadu niile
1.08 -- Nnukwu ọrụ na Islam
1.09 -- Iwu maka ime baptism ba n’ime mo nso
1.10 -- Baptizim na-enye nchebe na nchekwa
1.11 -- Baptizim - njikọta na ike nke Chineke
1.12 -- Irube isi n'iwu nile nke Kraist
1.13 -- Mee ihe niile m nyere gị n’iwu!
1.14 -- Gini bu ebum n’uche nke Iwu nke Kraist?
1.15 -- Iwu nke Muhammad
1.16 -- Ebumnuche nzuzo nke iwu nke Muhammad na nke Jizọs
1.17 -- M nọnyeere gị!
1.18 -- Ruo njedebe nke ụwa
1.19 -- Rue ubọchi ikpe-azu!
1.21 -- Ugboro anọ "Niile" na Nnukwu Commission
1.22 -- Nnyocha
1.01 -- Nnukwu ọrụ nke Jizọs Onyenwe anyị
"Mgbe ha hụrụ Ya, ha kpọọrọ ya isiala; ma ụfọdụ nwere obi abụọ." Jizọs bịara wee gwa ha okwu, sị, 'E nyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Ya mere gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim. n'aha nke Nna na nke Okpara na nke Mmuo Nso, na-ezi ha ka ha debe ihe nile m nyeworo unu n'iwu: lee, Mu na m nonyere unu oge niile, rue ogwugwu oge a. ' Amen.”
Mgbe Onye ahụ kpọgburu ma kpọlite n’ọnwụ mechara soro Chineke mezue mmekọrịta nke ụwa, Ọ chọrọ n’inye ndị niile nọ ebe niile nzọpụta Ya. Ebe agbagharawo nmehie nile nke mmadu, onye meriri n’onwu na ala oku kpọrọ ndi na-efe Ya na ndi n’eso uzo Ya ndi nwere obi abua, ma nye ha ikike ikwusa nzoputa ya nye mba niile. Ndị na-eso ụzọ Ya niile gbara ọsọ n'oge awa nke ọnwụnwa. Ọ dịghị onye n'ime ha ruru eru ịbụ onye a họpụtara ịbụ ohu nke Kraịst dị ndụ. Naanị ọkpụkpọ oku mere ka ha ruo eru ịbụ ndị ozi nke amara Ya.
Kraist kpughere ndi n’eso uzo ya na Nna ya nke bi n’elu igwe enyewo ya ike na ikike n’ebe ndi mo-ozi na ndi mmadu no, ma ihe omuma nile nke anya. (Nkpughe 5:1-14).
Kedụ ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ga-esi nyefee Ọkpara ya ike niile n'ike ya? Ọ tụghị egwu ọgba aghara, nnupụisi sitere n'aka Ya? Nna mara Nna ya nke oma. Ọ dị obi umeala ma nwee obi umeala. O meghị onwe ya oke. O jiri Onwe Ya chu aja diri ndi mmehie. Ọ kwanyeere Nna ya ugwu mgbe niile dịka Mmụọ Nsọ na-enye Ọkpara otuto mgbe niile. Chineke anyị bụ Chineke obi umeala. Nihi nka nna gha nyefee ike niile n’eluigwe na n’elu uwa nye Ọkpara Ya.
Mmụọ dị iche na-achịkwa Alakụba. Kor'an na-agwa anyị na enweghi ike ịbụ chi abụọ n'ihi na otu a ga - enwe ike ibili karịa nke ọzọ (Sura al-Mu'minun 23:91). N’oge ọchịchị nke Ottoman mgbe onye Sultan nwụsịrị, ụmụ ya ndị nwoke niile, ewezuga nke kachasị ike na nke kachasị ike, ka egburu iji gbochie ọgụ ịlụ-eze. Mmụọ nnupu isi na-achị n’ime Alakụba n’ihi na otu n’ime aha ezigbo aha iri isii na asaa nke Allah bụ “onye mpako, onye mpako” (Sura al-Hashr 59:23).
Na Jizọs ọ bụ ihe megidere. O jighi ikike ya wulite alaeze na elu ala jiri ụtụ na ụsụụ ndị agha. Kama Ọ gwọrọ ndị ọrịa nile bịakwutere ya, Ọ chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ọ kpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, gbaghara mmehie ma wụsa Mụọ Nsọ na ndị na-eche ya na ndị na-ekpe ekpere. Ọ malitere iwu ala-eze nke mmụọ ma tinye ike ya na mmelite nke ndị na-eso ụzọ ya. Aha ya bu “Jisos” ma burukwa nzube Ya: “O ghazoputa ndi nke ya na nmehie nile ha.” (Matiu 1:21)
Mgbe Jisos natara ike nile site n’aka Onye puru ime ihe nile, O nyere ndi neso uzo Ya iwu ka ha guzoro n’uzo. Ha tụkwasịrị obi n'ike ya na-akparaghị ókè ha kwesịrị ịhapụ zoro ezo ma nwaa ụzọ ọhụụ. Jizọs na-ezi anyị ka anyị jee ije na ọsọ ọsọ! Ọ chọrọ ka anyị kwụsị itinye uche anyị niile. Ọ chọrọ ịtọhapụ anyị na nnukwu "M" ma duzie anyị "gị". Ọ na-ezitere anyị ndị ọrụ ibe anyị. Ọ chọghị ka anyị jee ozi naanị gburugburu na obodo anyị, ebe Onye Ọzụzụ Atụrụ ahụ na-ahapụ ndị ezi omume 99 ma na-achọ otu atụrụ furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya (Luk 15:4-7).
Onye obula choro irube isi n'iwu nke Jisos choro nduzi nke mo. Ikekwe ị na-ekwu: "whomnye ka m ga-aga? Enweghị m onye kọntaktị!" Onyenwe anyị zara, sị: "Rịọnụ, a ga-enye gị ya!" (Matiu 7,7; Luk 11,9-13; Mak 11,24). Anyi nwere ohere i juo ya ka O juo anyi ase n’onye choro ndi Alakụba, bu ndi mmuo doziri obi na uche ha.
Onye ọ bụla chọtara ụdị onye na-achọ agaghị agwa ya okwu na-enweghị isi n’achọpụtaghị echiche na mmetụta ya, na etu o si ata ahụhụ. Agbanyeghị mgbe ahụ anyị ekwesịghị ịnye ụzọ edozi edozi mana jụọ Jizọs n'ime obi anyị ihe Ọ chọrọ ịgwa onye a. Anyị nwere ike ịrịọ maka okwu ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị maka onye ziri ezi; otu osila dị, mgbe Jizọs gwara anyị ihe anyị ga-ekwu, anyị kwesịrị ịgwa ya ma hapụ ọrụ dịịrị Jizọs gbasara otú okwu Ya si n'ọnụ anyị ga-esi rụọ ọrụ na onye na-achọ ya.
Nyochaa onwe gị! You nara oku n’etiti gị ka gị na onye agbata obi gị, onye ọrụ ibe gị, nwunye gị, ụmụ gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ kwuo banyere Jizọs? Nyochaa gbasara uche Jizọs na iwu Ya maka gị. Egbula oge irube isi. Ma ọ bụrụ na ị na-eche na-egbochi ma ọ bụ ụjọ, mgbe ahụ rịọ Ya maka ịhụnanya na ike Ya ka ị wee merie ihe mgbochi ndị a n'ime onwe gị! Enwere ọtụtụ mmadụ na-eche ịgba akaebe nke mmụọ gị karịa ka i chere! Agbanyeghị, ekpere mbu gị na-adịkarị mkpa karịa ịgba ama gị.
Onye obula choro ndi enyi ya ige nti, gha enye ha ihe ha na acho. Ezigbo onye nkuzi maara ihe karịa ụmụ akwụkwọ ya ma nwee ike ime ihe ha na-agaghị emeli, mana ọ na-agụ ha agụụ ịmata ihe ọ chọrọ ime. Ha anaghị atụ anya na ọ ga-amalite ọrụ dị egwu nke nnukwu okwu mana ha chọrọ ịhụ ma onye nkuzi ha nwere ikike na akụnụba ime mmụọ ma ọ bụrụ na ọ na-ebi dị ka nkuzi ya si dị. Ha ga-ege ya ntị ma gbakọta n'akụkụ ya.
Ndi Kristian nwere ike inye ndi n’enweghi okwukwe ha ihe ndi a enweghi. Ndi Kraist mara na Chineke bu ndi nna ha, na Jisos bu onye nzoputa ha, na Mo Nso nke na - akasi ha obi. O sitere n’amara gosi anyị afọ. O nyere anyị mmụọ nke Ya dịka onyinye. O n’enye udo n’ime anyị na ọ joyụ ebighi ebi. O wusiri anyị ịchụ-aja ịchụ-aja nye anyị (Ndị Rom 5:5) ma nyekwa anyị nzube maka ndụ anyị. O kpughere ndị na-eso ụzọ Ya eziokwu Ya (Jon 14:6) ma mee ka ha nwee olile anya maka ọdịnihu. O jiri ike ebighi ebi Ya metute anyị. Anyị kwesịrị ichezọ adịghị ike anyị niile ma jiri ekpere gbaa ama maka ihe Onye-nwe anyị bilitere emeworo anyị. Anyị kwesịrị inye ụwa ihe ọ na-achọ. Mụazụ Kraist anatala ndụ ebighi ebi site na Nwa Atụrụ Chineke. Soro onye agbata obi gị kerịta ya!
Iwu nke Jizọs hibere otu ọrụ na-aga n’ihu n’afọ 2000 gara aga. Ndị ozi ya bu ụzọ zie ozi ọma na mpaghara Mediterenian na Peasia. Mgbe ahụ, nzọpụta kwagara Europe na Central Asia, ọbụna banye China. Site na nchọputa nke America na ụzọ mmiri ga India, Onyenwe anyị bilitere n’ọnwụ mepere mba niile dị n’ụwa maka ndị àmà Ya. Taa umuaka nke Abraham, ndi Ju na ndi Alakụba, na-eche mkpebi ikpe ma ọ bụ imegide Jizọs. Ọbụna steeti ndị Kọmunist, dịka ndị USSR na China siri ike, ozioma na-abanye. Anyị kwesịrị ịghọta na rue ugbu a, ọ bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe a kpọrọ mmadụ na-akpọ onwe ya Onye Kraịst. Otutu onu ogugu uwa anyi amaghi onye nzoputa ha. A ka nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ! Anyị enweghị ike ịnọdụ ala zuo ike. A na-akpọ onye ọ bụla na-eso ụzọ Kraịst inye onyinye ya maka ndị ozi ụwa!
Iso uzọ Kraịst abụghị nanị okpukpe siri ike n’ụwa. Kpenira ahụ nyere iwu ugboro abụọ:
"Lụọ ha (jiri ngwa agha) ruo mgbe ọnwụnwa ọ bụla (nke ga-esite na Alakụba) ga-adị ọzọ, naanị okpukpe nke Allah ga-adịgide ..." (Sura al-Anfal 8:39; al-Baqara 2:193).
Ihe karịrị otu narị amaokwu na Qur na-akpali ndị Alakụba isonye na Agha Nsọ. Can nwere ike gụọ: "N’oge na-adịghị anya, Allah zụtara mkpụrụ obi na ihe onwunwe nke ndị kwere ekwe, ka ha wee nweta paradaịs. Ha na-alụ ọgụ maka ihe kpatara Allah, yabụ ha ga-egbu, a ga-egbukwa ya." (Sura al-Tawba 9:111).
N'ụzọ dị mwute, Ndị Kraịst malitekwara agha okpukpe na ịchịkwa egbe. Otu mpụ ndị a, na-agọnarị iwu nke Jizọs Kraịst nke gwara Pita: "Tiye mma agha gị n'ọnọdụ ya, n'ihi na onye ọ bụla were mma agha ga-eji mma agha." (Matiu 26:52)
Islam gbasaa na nnukwu ebili mmiri abụọ: mwakpo mbụ ahụ dịgidere otu narị afọ wee merie ndị dị nso na East, Northern Africa, Spain, Persia na akụkụ nke Central Asia.
Abali nke abuo bia na ndi Mongolia na nnabata ha. Ọtụtụ ụmụ Genghis Khan nakweere Islam dị ka ihe akaebe okpukpe maka mmeri ha. Ha meriri Central Asia wee bịa chịa China, North India, Mesopotamia na Russia. Ndị Ottoman turk, ndị ikwu ha, meriri Constantinople na 1453 wee nọchibido Vienna ugboro abụọ na-enweghị isi. Nsogbu na esemokwu ndị dị na Balkans na Nso Ebe Ọwụwa Anyanwụ bụ nkwupụta a na-edozibeghị n'ihi mbibi a na-emebi emebi nke ihe karịrị afọ 400 nke ọchịchị Ottoman.
Mgbaga nke atọ nke mgbasawanye nke Alakụba malitere na 1973 site na ọnụahịa mmanụ na-ebili ma na-agagharị na kọntinent niile. Ọ dịbeghị mgbe ọ bụla ọtụtụ ndị Alakụba bi na ngalaba nke ndozigharị ahụ taa! Ogologo oge ole ka Ndị Kraịst ga-achọ ihi ụra na ịchọrọ ndị otu ọdịnala iche?
Fọdụ ndị Alakụba na-ekwusi ike na okpukpe Alakụba bụ okpukpe anabata, udo nke udo. Ọtụtụ amaokwu na kor'an na-akpọ maka nkwanye ugwu na asọrịta mpi n'ọrụ ọma (Sura al-Baqara 2:256; al-Ma'ida 5:47; al-Ankabut 29:46 wdg). N'ezie, enwere ike ịchọta amaokwu ndị a na Qur, mana ha sitere n'oge oge Muhammad na ụmụazụ ya ka dị obere. Site na mgbe ahụ ejiriwo ikike dị iche iche nke Allah na Qur'an na-akpọ ndị Alakụba na njikere agha iji merie ndị iro niile (Sura al-Baqara 2:191; al-Tawba 9:4,28 wdg. .). N'iburu iwu Shari'a amaokwu mbụ banyere ịnabata ihe bụ ihe mgbe ochie ma ọ baghị uru ọ bụla. Ka o sina dị, ndị Alakụba bi n'ime ọnọdụ dị nta na-abụghị Alakụba na-eji amaokwu ndị a akpọchapula ma mee ka ọ pụta ìhè. Muhammad kwuru ọtụtụ oge: Agha bụ aghụghọ! Ọ bụghị ozi ụwa ka e wulitere elu ụwa, kama ọ bụ aghụghọ. Allah n’onwe ya bụ onye kachasị aghụghọ (Sura Al Imran 3:54; al-Anfal 8:30)!
Jizọs akụzighị echiche na-enweghị isi banyere Chineke. O kpughere Allah nke enweghị nghọta, onye ukwu na onye bi n'ime ụwa! Ọkpara Chineke kpughere aha nke Nna Ya ugboro 187 n’ime akwụkwọ ozi anọ ahụ ma nye anyị mmụọ nsọ Ya, onye bụ ezi Chineke. Jizọs kwuputara wee sị: "Mụ onwe m na Nna m bụ otu (- abụghị abụọ)!" (Jọn 10:30; 17:21-22) O nyere ndị na-eso ụzọ Ya iwu ka ha mee ndị niile kwenyere n'ozi nke ozioma, ọ bụghị n'aha chi atọ dị iche iche, kama n'otu aha Chukwu, onye bụ Nna. , Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ha atọ bụ ezigbo ịdị n'otu, dịka Jizọs kwuru, "Nna nọ n'ime m; Mụ onwe m nọkwa na Nna." (Jọn 14:10-11)
Dabere na ndị na-akọwa akwụkwọ Qur, dị iche iche, Muhammad kwuru ihe ijuanya na baptism ndị Kraịst wee kpọọ ya "ụcha ha" (al-sibghat). Ọ ghọtara na Ndị Kraịst dị iche na ndị ọzọ nọ na mpaghara ala Arab. Ha ezughị ohi, ha anaghị akpa ike, onye ọ bụla nwere nwunye otu, ha dị nwayọ ma hụ ndị iro ha n'anya (Sura Al Imran 3:55,199; al-Ma'ida 5:66,82; al-An ' am 6:90; Yunis 10:94; al-Nahl 16:34; al-Hadid 57:27; al-Saff 61:14 wdg). O gosiputara omume ndia na mmeghari ohuru nke ime baptism ha, na mmetụta nke ozioma na oke nkwekorita ha na Chineke (Sura al-Ma'ida 5:110; Maryam 19:88; al-Ahzab 33:7).
Kaosinadị, Muhammad malitere mkparị megide Chi nke Kraịst na Chi nke Mmụọ Nsọ. Nkwupụta abụọ ya na-adịghị mma nke okwukwe na-agụ: "Ọ dịghị chi ma ọ bụghị Allah!" Iwu nke Jizọs ka eme Baptism n'aha Chineke Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ mgbe nke a na-ada ka nkwulu na ntị ndị Alakụba. Ebe obu na Islam enweghi mo nso dika ozioma, odighi kwa ima banyere Nna, Okpara na Mo nso na Muslims (1 Ndi Korint 12:3; Ndi Rom 8:15-16).
Pol ewet ete: “Mfọnido Ọbọn̄ nnyịn Jizos Kraist ye ima Abasi ye ebuana edisana spirit ẹdu ye mbufo.” (2 Ndị Kọrịnt 13:13) Baptizim na-eme ka anyị na Chineke nwee mmekọrịta chiri anya, nweekwa nchekwa siri ike na Atọ n’Ime Otu. Ejikọtara anyị n'ime Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ site na baptism anyị. Ọ bụ Chineke bụ ọta anyị. Onye nānọgide na ihu-n'anya, nānọgide n’ime Chineke, ya na Chineke n’ime ya. Anyị kwesịrị iyikwasị ngwa agha nke Chineke niile ma sie ike "n'ime Onyenwe anyị, mgbe ahụ ajọọ mmadụ ahụghị ike ọbụla n'ime anyị" (1 Jọn 4:16; Ndị Efesọs 6:10-17).
Ihe omimi di na Islam adighi enwe obi uto na echiche amaghi ihe banyere Allah na okpukpere ha ma ghara ima jijiji banyere ibibi uzo abuo na Alakụba (rue paradaịs ma obu oku). Ha na-anwa iru Allah nke dị anya, dị ike ma bụrụ onye a na-adịghị ahụkebe site na ntụgharị uche. Ha na-anwa ịbanye n'ime ya ma ọ bụ na-emetụta ya iji bụrụ onye ya na ya. Ha na-adaba ike nke ndi mmuo ojoo site na anwansi. Allah na Islam dị anya ma bụrụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa, yabụ ụdị anwansi niile nwere ike ibunye ndị Alakụba n'ụzọ dị mfe. Enweghị nzọpụta dị na Islam. Oku nwere oku maka idobe onodu na edoghi anya n’okpuru iwu nke Allah, onye n’agha onye o bula choro ma duzie onye o bula choro (Sura al-An’am 6:39; al-Ra’d 13:27; Ibrahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Allah anaghị abanye na ọgbụgba ndụ ya na ndị Alakụba. O weere ha ka ndị ohu ya. Ọ bụghị Nna, ma ọ bụ Onye nzọpụta, ma ọ bụ Onye Nkasi Obi. Ọ na-echipịa onye ọ bụla na-edoghị onwe ya n'okpuru uche ya (Sura al-Ra'd 13:16; al-Zumar 39:4; al-Hujurat 49:14 wdg). Onye na-eme, Otú ọ dị, biri úgwù dị ka ihe ịrịba ama nke ohu ya-dị ka mmekọrịta nke Allah. Ibi úgwù na Islam bụ nnọchi maka baptizim Ndị Kraịst.
Jọn Baptist bụ ndịozi Jizọs na-eme baptizim na Osimiri Jọdan. Ha kwuputara mmehie ha n’ihu ọha na enweghị ike ha iji guzo n’ihu Chineke. Ma Jizọs mere ka obi sie ha ike na a ga-eme ha mmụọ site na mmụọ nsọ, na ha agaghịzi abụ ndị na-adịghị ike, ndị na-atụ egwu na ndị enweghị ike, kama ha ga-enweta nduzi dị ike nke Chineke (Ọrụ 1:4-8; Jọn 1:33–34).
N'asụsụ Semitic okwu Chineke bụ "El", nke pụtara ike na ume. Elohim bu otutu uzo, apuru itughari ya “Chi siri ike”. Okwu a bu "Allah" na Islam, otutu akwukwo, putara: O bu ike ahu! Aha Arab a n'echiche nke ya enweghị ike ịkọwapụta Atọ n'Ime Otu. Ọ nwere ike ịpụta naanị otu onye.
Jizọs gbara ama na enyere ya ike niile dị n’eluigwe na n’ụwa. O kpughere na Mmụọ Nsọ bụ ike nke Chineke. Chi anyi bu ike ato! Onye obula nke mere baptism naha ya ma nata nnabata nkea g'ekwe ndu ike nke Chineke. Ọ ga-anwụ site na ọnwụ na mmehie gaa na ndụ nke mmụọ ma kulite ndị ọzọ nwụrụ anwụ na mmehie na ajọ omume ga-akpọlite. Paul gbara akaebe banyere ihe omimi a n'ihu ọha: "Ihere ozi ọma nke Kraịst anaghị eme m n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke, ịchekwa ndị niile kwere na ya." (Ndị Rom 1:16)
Peter gbara eju Juu: "Chegharịanụ! Ọ bụla n'ime unu nwere ike na-baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie gị. Site na nke a, ị ga-enweta onyinye nke Mmụọ Nsọ!" (Ọrụ 2:38)
Onye obula natara ike nke Chineke site na okwukwe site na okwukwe, odigh kwa aru ya ozo n'ike nke aka ya kama na ike nke Onyenwe anyi ma a nata ike ozo, dika osi na aju. (Aisaia 40:29-31)
Na mba Arab okwu okwu a “idebe okwu Chineke” pụtara ịmụ ya site n'obi. Ọbụghị ndi Alakụba ole ma ole ha ji amaokwu ha. Oge ụfọdụ ha na-ajụ anyị ihe kpatara na anyị anaghị ahụ Chineke anyị n’anya maka na anyị anaghị edebe okwu ya! Mụta mkpughe site n’obi bụ maka ha ihe ngosipụta nke ịhụnanya mmadụ nwere n’ebe Chineke nọ. Kedu onye Kristian ji obi otu ozi ma ọ bụ Ozizi Elu Ugwu ahụ? N’ime ihe isi ike ufodu g’echeta Abuoma 23 ma obu 103, obi uto ma obu 1 Ndi Korint 13. Ndi Kraist “na eche” karie, ma “mara” ole! Ndị Alakụba na-ama "ọtụtụ ihe" mana "ọ naghị eche na ha"! Na omenaala anyị nke nwere oke mmụọ, anyị kwesịrị ichegharị na ọbụghị naanị ịnụ okwu Chineke kamakwa chekwaa ya (Luk 11:28). Onye o bula mejuputara ihe ya na amaokwu nke Akwukwo nso, ga - enweta nkpuru obi ike.
Otú ọ dị, ichebe naanị ya ezughị. Jizọs kwuru n'ụzọ doro anya: "Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, debe ihe m nyere n'iwu." (Jọn 14:15) Kedu iwu nke Kraist? E duziri anyị iche echiche banyere amara, izi ezi, mgbaghara mmehie, ngọzi na ihe banyere Jizọs n’onwe Ya. Naanị mmadụ ole na ole na-amụ iwu Ya. Onye obula g’eji nlezianya guputa akwukwo ozi anọ nke oma puru ihu ihe ruru 500 nke ma obu iwu zuru oke nke Kraist. Fọdụ n’ime ha abụrụla ihe a ma ama banyere Ndị Kraịst: "Hụ ndị iro gị n'anya! Gọọnụ ndị na-akọcha gị ma na-emere ndị na-akpagbu gị na ndị na-akpagbu gị ihe ọma." (Matiu 5:44-47) "Gbaghara dị ka Chineke gbaghaara gị." (Matiu 6:12,14-15) "Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe gị ikpe!" (Matiu 7:1-5)
Nchigharị nke Kraist di nkpa maka mmadu nile. Agbanyeghị, ịgbanwe ụzọ ndụ anyị dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iso Kraịst. N’adịghị nsọ, ọ dịghị onye ga-ahụ Onyenwe anyị (Mat. 5:8; 1 Ndị Tesalonaịka 4:3; 1 Jọn 3:1-3).
Nye ga-anwa ịkụziri onye ọzọ ịgbaso okwu nke Jizọs ma ghara ibu ụzọ soro ha n'onwe ya? Thekpọ oku nke Jizọs ịkụzi na idobe okwu Ya na ndụ anyị kwa ụbọchị bụ ọkpụkpọ oku nye ndị nkuzi, ndị na-ekwusa ozi ọma na ndị ozi izizi ka ha chegharịa. Onye nwe anyi achoghi inu okwu nzuzu n’aka anyi, kama O choro ihu anyi n’eme ihe anyi kwuru. Ma ọ bụghị ya, anyị na-emebi ọrụ anyị site n'omume anyị!
Jizọs kwuru, sị: "Kụziere ha ka ha mee ihe niile m nyere gị n'iwu." Obere okwu a “niile” nwere ike ime ka anyị chee na a na-ama anyị ikpe. Olee onye n’ime anyị ma ihe niile Jizọs gwara anyị ka anyị mee? Onye nwere iwu Ya nile n’iru ya n’oge nile? Onye na-akuziri ya umu aka ya, otu ndi umu agbogho na ulo uka? Whonyekwa na-emezu iwu nke Kraist n'okwu ọnụ, n'omume na echiche n'ụzọ ziri ezi? Ọ dịghị onye ga-abụ onye ezi omume n'ihe a niile. Kpukpu anyi nile n’eji igbuwa okwu a. Ọbụna onye senti kachasị mma nwere ike wedata ihu ya na stammer: "Onyenwe anyị, ekpela m ikpe!" Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị atụgharịa uche na nchịkọta nke iwu niile nke Jizọs, anyị ga-enwe obi ịrọ oke. O kwuru, sị: "Ya mere zuo oke, dịka nna gị nke oke zuru oke." (Matiu 5:48) "Ọ dịghị onye na-eme ihe ọma, ọbụnadị otu!" (Abụ Ọma 14:2-4; Ndị Rom 3:19-23; 7:3-8: 4 etc)
Anya ndéemere nke Kraist naebi site na amara ya na enwe ezi omume na nso puta bochi ya niile site bara Ya. Onye ọbụla gụrụ 1 Jọn 1:7–2:6 n’ekpere nwere ike ịchọta nkọwa nkasi obi nye iwu a nke Onye-nwe.
Jizos choro ibuli anyi n’onodu Nna ya. O bu ebum n’obi ya ka nkwa nke onye okike mezuru na ndu anyi: “Chineke kere nwoke n’onyinyo ya, n’onyinyo Chineke ka O kere ya; nwoke na nwanyi ka O kere ha.” (Jenesis 1:27) Naanị Jizọs nwere ike ikwu, sị: "Onye ọ bụla nke hụrụ m hụrụ Nna m." (Jon 4:19) Ọ chọrọ ịgbanwe ndị na-eso ụzọ ya n'onyinyo nke Ya.
N’okpuru ọgbụgba ndụ ochie Chineke nyere iwu: “Dị nsọ n'ihi na adị m nsọ!” (Levitikọs 11:44; 19:2) Ọ bụ ya bụụrụ m uda ma bụrụkwa ihe mgbaru ọsọ ime mmụọ nke ndị niile a kpọrọ.
N’okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ Jizọs nyere iwu, sị: "Hụnụ ibe unu n'anya dị ka m siri hụ unu n'anya." (Jon 13:14-15) Enye anam ima Esie enam udomo ọnọ nnyịn. Jizọs n'onwe Ya bụ iwu anyị. Pọl dere na anyị ga-yikwasịrị Jizọs, ihe e kere ọhụrụ. Anyị ga-ekpuchi ya kpamkpam. Anigye a yenya fi “Kristo mu” no mu. Oge ihe dị ka ugboro 175 ị nwere ike ịchọta ahịrịokwu a na agba ọhụụ. Paul ghọtara ihe nzuzo a: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla dị n'ime Kraịst, ọ bụ ihe e kere ọhụrụ. Ihe ochie agadagowo, ihe ọhụrụ abịawo!" (2 Ndị Kọrịnt 5:17-21)
Okwu Jizọs: "Kụziere ha ka ha debe ihe niile m nyere gị n'iwu" nwere ike iji ụfọdụ adjustement gụọkwa na Qur. Agbanyeghị, enwere nnukwu ọdịiche dị na iwu nke Kraist na iwu nke Muhammad. Ọ bụ eziokwu na ndị isi ụlọ akwụkwọ anọ nke ụlọ akwụkwọ Alakụba họpụtara ihe dị ka amaokwu 500 na Qur'an dị ka ihe ndabere nke Shari'a ha. Ma ndia nwere amaokwu ndi n’eme ka ntutu anyi guzo na njedebe:
"Ekwela ka onye iro m na onye iro gị bụrụ enyi ma gosi ha ọmịiko!" (Sura al-Mumtahana 60:1)
"Lụrụ ihe ọ bụla masịrị gị n'etiti ụmụ nwanyị: abụọ, atọ ma ọ bụ anọ n'ime ha! Ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị na ị gaghị empụ ha ikpe ziri ezi, naanị otu!" (Sura al-Nisa 4:3)
"Banyere ndị ahụ (ndị nwunye) ndị ị na-atụ egwu na ha ga-enupụ isi. Kwusara ha ozi ọma, hapụnụ ha naanị n'ihe ndina ha, tie ha ihe." (Sura al-Nisa 4:34)
"(Allah nyere Muhammad iwu) Were onyinye ha; site na nke ị ga - asacha ha ma mee ka ha dị ọcha." (Sura al-Ma'ida 5:6; al-Tawba 9:103; al-A'la 87:14 wdg)
"(Banyere) nwoke na nwanyị zuru ohi: bipụ aka ha abụọ ka ọ bụrụ ntaramahụhụ." (Sura al-Ma'ida 5:38).
Onye ọ bụla jiri iwu Kraist na iwu Muhammad ga-amata na mmụọ dị iche bi n'ime iwu abụọ a. N'ime iwu nke Muhammad enweghi ihunanya, mmekorita nke ya na Chineke, onweghi onyinye ịchụ onwe onye nye ndi ozo na odidi nso nke Chineke dika ihe nlere nye mmadu nile.
Na njedebe, Muhammad n'onwe ya bu ọdịnaya nke iwu ya. Ewere ndụ ya (Sunna) dịka ebe nke abụọ maka ngwụcha ikpeazụ nke iwu Alakụba. Onye Alakụba ọ bụla kwesịrị ịdị ka Muhammad dịrị ndụ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụghị ezigbo onye Alakụba. Muhammad sonyere na mwakpo 29 na mmeri ma lụọ ndị nwunye iri na abụọ ma ọ bụ karịa.
Ebumnuche nke Iwu nke Islam, Shari'a, bụ ọdịmma nke ọha ndị Alakụba (Umma), nke ekwesịrị iguzobe ka obodo okpukpere chi nke Alakụba na-achị. Alakụba abụghị okpukpe na-ekewa okwukwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ọ dabere na iwu Shari'a. N'aka nke ọzọ, iwu Shari'a nwere ike irubere iwu na steeti ndị Alakụba. Ebumnuche nke Islam ka bụ obodo nke okpukpe. Dị Islam ọ bụla nwere ike ịbụ naanị mmepe nwa na - eto eto.
Kraist kwuwapụtara: "alaeze m abụghị nke ụwa a!" (Jon 18:36-37) Hiska ya, ya na ndị ọ kpọrọ site na mba dị iche iche, guzobe alaeze nke mmụọ ya na gburugburu ha. Mmekọrịta nke ndị na-eso ụzọ Ya bụ mmalite nke ala-eze ebighi-ebi Ya (Jọn 13:34-35). A na-agbagha ha ka ha bụrụ nnu nke ụwa na ìhè nke ụwa. Iwu nke Jizọs ebughi n'obi iwulite okpukperechi nke ndi Kraist kama igbanwe ndi n’eso uzo Ya ka irube isi n’iwu Ya na ime ka ndi obodo ha.
Y’oburu na onye ozi nke Jizos Kraist ghajiri n’ime onwe ya ma mara na odighi ike ya na ezughi oke ya ma kwuputa ya, mgbe ahu Jizos gwara ya: “Meghee anya gi! Lee, ahurum ebe a! Anyi adi! Anam adi! Agaghm ahapra gi! Ahụrụ m gị n'anya! Ana m enyere gị aka! M ga-akwado gị ruo mgbe ịka nká!"
Ẹdọhọ ke Jizos ama owụt kiet ke otu mme anditiene enye ke ndap iba emi enyenede udịghi ukot ke ekpat emi anamde an̄wan̄a ete: “Sese ami mmasan̄a ye fi ke anyan ini.” Mgbe ụzọ nke abụọ nke ụzọ ụkwụ gbapụrụ ọsọ n'ugwu dị ize ndụ, onye ahụ na-arọ nrọ na-akọcha, sị: "Gịnị mere i ji hapụ m naanị nnukwu mkpa?" Onye-nwe wee zaa ya, "ebu m gị ruo mgbe ụzọ ahụ ga-adị mma." Ihunanya nke Kraist kariri anyi n’eche. O mesiri ndi ozi Ya obi ike: “Onweghi onye puru inapu ha n'aka m!” (Jọn 10:28) Ọnụnọ nke Jizọs pụrụ ime ihe nile na ịdị omimi Ya kwesịrị ịgba anyị ume inwe okwukwe na nnọgidesi ike na ọnụnọ ya.
Taa, ọtụtụ puku ndị ozi ala ọzọ na mba ọzọ na Ndị Kraịst mba ọzọ n'ọtụtụ mba na-eji ikwesị ntụkwasị obi na-ejere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ozi, ọbụlagodi na ebe ndị mmụọ na-emegide Kraịst na-achị. E gbuwo ụlọ ụka ma kpọọ Ndị Kraịst na-arụ ọrụ asị, kwutọọla ma kpagbuo ha. Havefọdụ agbala ọsọ ma ọ bụ taa ahụhụ. Ọtụtụ ndị bi na nzuzo. Jọ na-ezu ike imebi ha.
Mana Jizọs na-emesi anyị obi ike, sị: "Ihe ga-adaba gị, bute m ụzọ!" Mgbu a na aka a na-ebu ụzọ banye na ụbụrụ, tupu anụ ahụ emetụ ya. Kraist dika onye isi nke nzuko Kraist buru uzo chee ahuhu nke ndi okenye Ya tupu ha onwe ha ahughi ya (Olu 9:4-5). Ọ dịghị onye n'ime anyị bụ naanị ya. Nwa-aturu nke Chineke soro anyi je n’okporo ahuhu rue ọgwụgwụ. Taa enwere nhụjuanya na otuto karịa nke Jizọs karịa ka anyị maara.
Na baptizim gị, Jizọs ekwela gị nkwa nke ịnọnyere gị oge niile nke ndụ gị, ọ bụrụhaala na ịnọnyere Ya ma na-efe Ya. Obuna oke ihe egwu na oge onwu O gha no gi nso. Ọ gwara gị: "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Ọ na-ekwere na m ga-adị ndụ, ọ bụ ezie na ọ nwụrụ anwụ, na ndụ nke na n'ebe m nọ agaghị anwụ anwụ. Ì kweere nke a?" (Jọn 11:25-26) Jizọs chọrọ iburu gị ruo mgbe ị kara nká ma nọnyere gị, ọbụlagodi mgbe ị hapụrụ ụwa a (Abụ Ọma 23:4-6).
1.20 -- Allah na ndị Alakụba ya?
Na koria, edere ya na mgbe Muhammad gbara oso site na Maska gaa Medina, o kpuchitere onwe ya n'otu ọgba wee gwa Abu Bakr: "N'ezie, Allah nọnyeere anyị!" Ndị Alakụba obi jọrọ njọ nwere ahụtụkwuru ọfụma (Sura al-Tawba 9:40).
O bu ihe nwute, Allah a onye kasirila Muhammad obi abughi ezi Chineke nihi na Allah kwuru ugboro iri na asaa na kor'an na-enweghi nwa nwoke na Kraist nwughi onwu n’elu obe (Sura al-Nisa 4:157). Nna nke Jizos Kraist nonyereghi ndi Alakụba. Ha gọnarrị ọnwụ nke mkpuchi mmehie nke Jizos ma na-ekwu na mmụọ a na-amaghị, nke a na-akpọ Jibril (Gabriel) ga-abụ Mmụọ Nsọ. Mụọ nke na-akpali ndị Alakụba na-eme ka ha bụrụ onye akpọrọ asị. Anyị kwenyere na ewezuga Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ, na enweghị Chukwu ọzọ.
Jizọs ahụ dị ndụ na-emesi ndị na-eso ụzọ ya obi ike na enyere ya ike NIILE dị n’eluigwe na n’elu ụwa. Ya mere, ha kwesịrị ịga mee ndị mba NIILE ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs na-eme ha baptizim nke aha Nna na nke Ọkpara na nke Mụọ Nsọ. Ha gha akuziri ndi kwere ekwe ka ha debe iwu ya NIILE; o kwere ndị ozi ya nkwa na ọ ga-anọnyere ha ụbọchị NILE rue njedebe nke ọgbọ.
Jizọs na-agba gị ume ka ị tụkwasị obi n'ihe anọ ya NIILE na imezu iwu Ya. Ọ g’enyere gị aka idobe iwu Ya, na ịhapụghị ndị ohu Ya ọ bụla n’onwe ha. N’ikpe azu, unu ghahu ihu Ya.
1.22 -- N N Y O C H A
Ọ bụrụ na ị jirila nwayọ mụọ akwụkwọ nta a, ị ga - enwe ike iwepu ajụjụ ndị a dị mfe. Onye ọ bụla zara pasent 90 nke ajụjụ niile dị na akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a nwere ike inweta asambodo site na etiti anyị
n'enyemaka iji mee ka ya na ndi Alakụba kwurita banyere Jizọs Kraịst
Nso ke Jizos ọnọ ererimbot ke enye ama akakpa ye edifiak ndu?
Nye ruru eru ịbụ onye ozi nke Jizọs Kraịst?
Gini mere Jizos jiri tua ndi obi abụọ ajuju n’etiti ndi n’eso uzo ya na nnukwu oru ya?
Gịnị ka ọ pụtara na Jizọs nwetara ikike niile n’eluigwe na n’elu ụwa?
Gini mere na Nna nke elu igwe atughi egwu na Okpara ya ga-enupụrụ ya isi mgbe o nyechara ya ikike na ike?
Gịnị mere Jizọs ji nye ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha 'gaa' ghara 'ịnọdụ'?
Kedụ ka ị ga - esi chọta onye na - eche ịgba akaebe gị, kedu ka gị na ya ga-esi agwa ya okwu?
Kedụ ka ị ga - esi chikọta ndị na - eso ụzọ. Kedu ihe anyị nwere ike ịnye ndị na-ege anyị ntị?
Gịnị kpatara Nnukwu Ọrụ ji eduru anyị bịakwute mụ Ishmael na ofmụ Jekọb? Ugburu a ma ọ bụ okpukperechi ka agụnyere na atụmatụ a nke Chineke?
Kedụ ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa na-akpọ onwe ha Ndị Kraịst taa? Kedu ihe eziokwu a pụtara nye gị?
Gini bu ihe baptizim di n’aha na nke Okpara na nke Mmuo Nso?
Kedụ ka ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu si gosipụta na nnukwu ọrụ?
Kedụ ka ị ga-esi nata ike na nduzi na ozi gị maka Kraịst?
Gini mere baptism na ịmụgharị abụghị njedebe, kama mmalite nke ndụ Ndị Kraịst?
Kedụ ihe dị iche na izisa ozi ọma na - abụghị nke Ndị Kraịst? Kedu ihe nke a nwere ike ịpụta maka mkparịta ụka gị na ndị Alakụba?
Olee isiokwu anyị kwesịrị ikuziri ndị kwere ekwe?
Iwu ole n’ime Kraịst ka ị pụrụ ịchọta n’ime Oziọma anọ a? N'ime n’ime ihe ndị a ka ị chere ihe kacha mkpa nye onye Alakụba?
Gini bu ihe di iche n’onye ezi omume site n’okwukwe naanị ya na ihe kwesiri ekwesighi ime ezi omume site na nrube isi nke okwukwe dika onyinye amara?
Gịnị bụ ọkọlọtọ kachasị maka Iwu ahụ na Agba Ọhụụ?
Gini mere iwu nke atọ na Nzukọ-nsọ ​​ukwu ji emebi mpako nke onye nkuzi ọ bụla, onye nsọ na odibo ma ọ bụrụ na ọ na-agwa onwe ya eziokwu?
Olee otú Jizọs ga-esi kwe nkwa, sị: “Lee, m nọnyeere gị”?
Gini mere Jizos ji kwere nkwa inonyere unu ebe nile ma oburu na unu jeere ozi n’aha Ya?
Gini mere ndi Alakụba ji kwenye na Kraist (Isa) na Chukwu dị ndụ?
Gini mere na o bughi ihe Onye Ala ikari iche na chi abuo gesi bi n’udo rue ebighebi? Kedu ihe kpatara nke a enweghị nsogbu maka Ndị Kraịst ikwere?
Detuo Nnukwu Ọrụ Ndị Alakụba (na Bekee) n'ụzọ doro anya (yana ntụnyere nke amaokwu ahụ na amaokwu ahụ) wee tulee ya na Nnukwu Onye Nlekọta Ndị Kraịst.
N'ime ụzọ dị a andaa na mba ole ka ndị Alakụba gbasaruru n'oké ebili mmiri atọ ha, oleekwa pasent ole ndị ụwa nọ bụ ndị Alakụba taa? Ole Alakụba ole bi na obodo nke gị?
Kedụ ihe ọ pụtara nye onye Alakụba ịnabata ndị nọ n'okpukpe ndị ọzọ, ruokwa ole enwere nnabata a? Olee mgbe ọ ga-amalite ịbụ onye anabataghị?
Kedụ ihe kpatara Muhammad jiri jikọta ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu?
Kedụ ihe K'anyị kwuru maka ime baptism na Kraist?
Kedụ ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti Iwu nke Muhammad (Shari'a) na Iwu nke Kraist n'Ozizi Ya?
Gini bu ebum n’uche nke Iwu Alakụba na gini bu ebum n’uche nke Iwu Kraist?
Ọ putara nye onye Alakụba na Muhammad bụ ọkọlọtọ maka Iwu Alakụba?
Gini mere na Muhammad ekweghi ndi neso uzo ya nkwa: "Lee, a nọnyeere m ubochi niile rue ogwugwu nke oge a."
Kedu ihe anọ “nile” dị na nnukwu pụtara?
A na-ahapụ onye ọ bụla sonyere na ajụjụ a ka o jiri akwụkwọ ọ bụla mee ihe ya ma jụọ onye ọ bụla kwesịrị ntụkwasị obi mara ya mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị a. Anyị na-eche azịza ederede gị gụnyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na ozi ịntanetị gị. Anyi n’ekpeere gị ekpere n’ebe Jizọs nọ, dị ka Onyenwe anyị dị ndụ, ka Ọ ga-akpọ, zitere, duzie, wusie ike, chebe ma nọnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị!
Gi na oru Ya,
Abd al-Masih na umunne ya n’ime Onyenwe anyi
Ziga nzaghachi gi:
Page last modified on March 23, 2020, at 11:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)